Maxkamadaha Islaamiga oo Wadahadalka Nabadda Soomaaliya ku Xiray Bixitaanka Itoobiya...
Arbaca 31 January 2007 | Tarjumadii: SomaliTalk.com | Isha: www.sudantribune.com | La Razon
Jan 30, 2007 (MOGADISHU) – Midowga Maxkamada Islaamiga ah waxay ku gacan sayreen in ay wadahadal la yeeshaan Itoobiya ilaa inta ay Ciidamadeedu ku jiraan gudaha Soomaaliya. Waxay intaas ku dareen in mid ka mid ah hoggaamiyayaashooda uu Nairobi ku u tegey weydiisashada Safiirka Maraykanka ee dalka deriska ah.
Mustafa Axmed, oo ah lataliyaha Sheikh Shariif Sheikh Axmed, hoggaamiyaha Midowga Maxaakiimta Islaamiga ah (MMI), waxa uu Mustafa u sheegay wargeys maalinle ah oo ka soo baxa dalka Spain, oo la yiraahdo La Razon in ururkiisu uusan wax wadahadal ah la geleyn Itoobiya inta ciidamadoodu ay ku sugan yihiin Soomaaliya. Mustafa Ahmed waxa uu Maraykanka ugu baaqay in ay dalka ka joojiyaan duqaynta, waxana uu beeniyey in ay wax xiriir ah la laayeen Al-Qaeda. Waxaa sidaas warka ku bilaabay shabakada Sudan Tribune oo soo xiganeysey wargeyska La Razon.
Waxa uu Mustafa Axmed xaqiijiyey in mowqifka MMI taagan yihiin uu yahay wadahadal nabad gelyo oo ay ka qayb qaataan dhammaan dhinacyada ay ka mid yihiin EU, USA iyo Dalwadda Soomaaliya. Waxa uu intaas raaciyey in bilowga wadahadalkaasi uu ku xiran yahay in marka hore ay Ciidamada Itoobiya ka baxaan Soomaaliya.
"MMI waxay markii hore aqoonsanaayeen sharci ahaanta Dawladda Kumeelgaarka ah, mowqifkayagiina wax iskama bedelin. Waxaan ku celinayaa: In aan diyaar u nahay wadahadal iyo wadashaqayn heshiis qaran."
Dhinaca kale, madaxa Midowga Yurub u qaabilsan horumarinta iyo gargaarka Louis Michel, iyo madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf kulan ay maanta (Jan 30, 2007) ku yeesheen Addis Ababa waxay isku raaceen heshiis Qaran oo ay tahay in ay ka qayb gataan hoggaamiye-dhaqameedada, hoggaamiyaasha diinta, iyo weliba kooxaha siyaasadda ee Soomaaliya si looga gudbo siyaasadda cakirnayd 16ka sano. Lakaiin madaxweyne Cabdullaahi waxa uu warfidiyeenada u sheegay in uusan wadahadal la yeelanayn kuwa ka dambeeya siyaasada murugsan.
Hoos waxaa ku qoran qayb ka mid ah warbixintii iyo waraysigii uu wargeyska Spanish-ka ee ku soo baxay shabaka La Razon 30kii Janaayo 2007:
Mogadishu: Mustafa Axmed, oo 38-jir ah, waa lataliyaha Sheikh Sharif Sheikh Axmed, oo ah mid ka mid ah madaxda sare ee golaha Maxaakiimta Islaamiga (MMI), kan kale waa Xasan Daahir Aweys oo ah madaxa golaha Shuurada. Mustafa Axmed oo ah qunyar-socod sida Sheikh Shariif, waxa uu hadda si dhuumaalaysi ah ugu nool yahay magaalada Muqdisho, sida qaar kale oo ka mid ah dagaal-yahaniinta Islaamiyiinta, kuwaas oo aan ka bixin caasimadda ka dib markii ay ciidamada Itoobiya ay gacan ku siiyeen Dawladda Kumeelgaarka ah in ay la wareegto dalka, malaysiyada Maxkamada Islaamigana qalwo lagu geliyo Kismaayo, meel u dhow xadka Kenya. Wargeyska La Razon waxa uu Mustafa Axmed waraysi kula yeeshay qol ku ka mid ah Hoteel ku yaal Muqdisho.
ITOOBIYA WAA IN AY MARKA HORE BAXDAA
Maxaa ka run ah warka la isla dhex marayo ee sheegaya in Sheikh Shariif lagu hayo Nairobi (Kenya) oo ay su'aalo weydiinayaan Maraykanku?
Mustafa Axmed: Maya. Warkaasi gebi ahaanba waa mid khaldan. Sheikh Shariif waxa uu Nairobi ku aadey weydiisashada Safiirka Maraykanka Michael Ranneberger, kaas oo uu kala munaaqashoonayo xaaladda iyo mustaqbalka Soomaaliya.
Ma ii sheegi kartaa wax faahfaahin ah oo ku saabsan wadahadalkaas?
Mustafa Axmed: Waxa keliya oo aan kuu sheegi karaa waa in aan ilaa hadda maxsuul ka soo bixin. Weli kulamadoodii waa u socdaan. Shakhsiyan anigu waa ku kalsoonahay hoggaamiyahanaga, waana ogahay in uu Ameerika u jihaynayo jidka wada hadalka iyo is fahamka. Midowga Maxkamadaha Islaamigu waxay rajaxayaan wadahadalka nabadeed iyo wada xaajoodka dhinacyada oo dhan - USA, EU iyo DFKMG - laakiin wax wada hadal ah la geli meyno Itoobiya inta ciidamadeedu ay ku sugan yihiin dalkayaga. Shuruudaasi waa mid aan la bedeil karin. MMI waxay markii hore aqoonsanaayeen sharci ahaanta Dawladda Kumeelgaarka ah, mowqifkayagiina wax iskama bedelin. Waxaan ku celinayaa: In aan diyaar u nahay wadahadal iyo wadashaqayn heshiis qaran.
WAX XIRIIR AH LAMA LIHIN AL-QAEDA
Maxaa shuruud ah oo aad uga baahan tihiin Maraykanka haddii is-faham la gaaro?
Mustafa Axmed: Ugu horayn, in uu joojiyo duqaynta dalka. Waxaan ku casumeynaa in ay halkan yimaadaan oo ay arkaan xaqiiqada jirta. Dawladda Maraykanku waxay ku kacaysaa khalad, sababtoo ah waxay heshaa akhbaar khaldan. Ma jiraan wax dagaalyahaniin Al-Qaeda oo ku sugan gudaha Soomaaliya, wax xiriir ahna MMI lama lahan ururkaas. Waxaan haysanaa hub aan ku helo siyaabo kala duwan, umana baahnin Al-Qaeda in ay na hubayso, mana aqbalayno qaabkooda ay ku hawl galaan. Halgankayagu waa sharafta Dadka Soomaaliyeed. Sababtaas weeye tan aan Maraykanka ugu baaqeyno in uu cadaadis saaro Qaramada Midoobey si ay shirweyne Qaran oo dib u heshiisiin ah in lagu qabto gudaha Soomaaliya.
Diyaar ma u tihiin in aad aqbashaan ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika (AU)?
Mustafa Axmed: Dabcan: waxaan rabnaa in dalku ahaado nabad, in kasta oo aanan u malaynayn in ay xal yihiin. Waxaa hore u jirey hawlgalkii sitey koofiyada buluugga ee Qaramada Midoobey, ilaa haddana lama arag wax horumar ah oo la arkay. Si loo helo xasilooni, waa in dhammaan garabyada lagu daro dawladda, waxaana qayb ka nahay dawladda, inkasta oo ay isku dayeen in ay na faquuqaan.
JIHAADKA LOOGA SOO HORJEEDO ITOOBIYA
Tallaabadee ayaad qaadeysaan haddii Itoobiya ciidamadeedu aysan ka bixin dalka sida ay dalwadda Itoobiya ku ballan qaaday?
Mustafa Axmed: Haddii Ciidamada Hubaysan ee Itoobiya ay sii wadaan in ay dalka kusii jiraan, oo ballanta ay samaysan Dawladda Federaalku aan la tixgelin, waxaan qaadi doonaa Jihaad aan kaga soo horjeedno Itoobiya. Faraha kama qaadi doono halganka hubaysan ilaa inta laga waayayo hal askari oo Itoobiyaan ah oo ku jira dalka. Waxaan maleyshiyada ka saarnay caasimada si aan u badbaadino dhimashada shicibka, laakiin tani waxa keliya oo ay tahay waa xeelad bedelasho.
Shicibku ma taageeri doonaa Maxkamadaha Islaamiga?
Mustafa Axmed: Soomaalidu waa na taageereen sababtoo ah MMI waxay Muqdisho keeneen ammaan. Waxaan ka shaqaynayn dib u dhiska guryaha iyo nadaafadda jidadka caasimadda. Mahadi haka gaartee anaga awgeed, dadku waxay socon kareen iyagoo aan wax cabsi ah ka qabin rabshado. Waxaan keenay degganaansho, waxaana soo dabar goyney musuqmaasuqii qabqablayaasha dagaalka. Dadku bannaanka nooma tuurin: Waxay ahayeen ciidamda Itoobiya, sabatoo ah dawladii dalka ayaa dan ka lahayn ayadoo ahayd dawlad tabardaran ee Soomaaliya, sidaas daraadeed waxay (itoobiyaanku) ka yeeli karaan sida ay rabaan oo dantooda garka ah.
Yaa ka dambeeya weeraradii ugu dambeeyey ee caasimada, kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaran dersin dad ah?
Mustafa Axmed: War uma hayo. Dawladdu waxay weeraradaas ku eedeysan Muqaawamada Islaamiyiinta. Waxaa jira kooxo badan oo xag jira, kuwaas oo dhammaantood aan la xakumi karin. Waxaan rabaa in aan caddeeyo MMI in aysan ka dambayn weerararadaas dhimasha keenay.
Maraykanku waxa uu tilmaamay dhawr xubnood oo ururkaaga ka mid ah in lagu eedeeyey in y xiriir la leeyihiin shabakadda Argaggaxisada caalamiga ee Al-Qaeda. Akhbaartaas ma beenineysaa?
Mustafa Axmed: Hore ayaan u sheegay, haddana waa ku celinayaa: Midowga Maxkamadaha Islaamiga wax xiriir ah lama leh Al-Qa’idah. Waa cududaar ay u adeegsadeen in ay na weeraraan.
Tarjumadii: SomaliTalk.com | Isha: www.sudantribune.com | La Razon
English Vesion::: Somali Islamists say Ethiopian withdrawal prior to peace talks
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 31, 2007
Weeraro xooggan oo xalay lala beegsaday Fariisimada Ciidamada Itoobiya ee Ceel-Cirfiid
Weeraro xoogan ayaa xalay laga maqlayay deegaanka Ceel-cirfiid ee Magaalada Muqdisho iyo Suuqa Darmoole ee Duleedka Magalada... Akhri...
Golaha Muslimiinta Kenya oo codsaday in ay la kulmaan Sheekh Shariif.
.Midowga Afrika oo soo dhaweeyey qorshaha uu Talyaaniga
.Shirkii Midowga Afrika oo ay ka soo baxeen go’aano ay..
.C/llaahi Yusuf oo sheegay in uu soo dhaweynayo qorshaha
Wararka oo dhan ka akhri halkan... Jan 31
Xafiisyadii Maamulkii Hore Ee Jowhar Oo La Biliqaystay Iyadoo Aysan Soo Gaarin Maamulka cusub
.Garowe:Haayadda Unesco oo qalab iyo Buugaaga...
.Hay’adda SORDA oo soo gabagabeysay siminnaar AIDS-ka
.Lacag la dul dhigay Madaxda ka tirsan DFKMG....
.Kulan Ku Dhex Maray Adis-ababa Luwis Michel Iyo C/laahi
.Ciidamo lagu soo daad gureeyay DGPL....